निजगढ विमानस्थल निर्माणको वातावरण अनुकूल बन्दै छ
बहसमा निजगढ विमानस्थल-९
नवराज कुँवर काठमाडाैं, ३ माघ
बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चा भएको २५ वर्ष पुगिसक्यो । तर, विमानस्थल बन्ला कि नबन्ला भन्ने अन्योल कायमै छ । गत मंसिरमै शिलान्यासको तयारी गरिए पनि रूख कटान गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि विमानस्थलबारे अन्योल बढेर गएको छ । किनकि, रूख काट्ने मात्रै चुनौती नभएर धावनमार्गका लागि प्रस्तावित क्षेत्रभित्र पर्ने १ हजार ४ सय ७६ घरधुरी रहेको टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनको पनि टुंगो लागेको छैन । यसैगरी विमानस्थलको मोडालिटीसमेत अहिलेसम्म तयार भएको छैन । यी यावत् चुनौतीलाई चिरेर विमानस्थल बनाउन केकस्तो तयारी भइरहेको छ र अहिलेसम्म के–के गरियो भन्ने विषयमा बारामा रहेको दोस्रो विमानस्थल आयोजनाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर विजय यादवसँग शिलापत्रका लागि नवराज कुँवरले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि के–के काम भए, भइरहेका छन् ?
डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी सम्पन्न भइसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको ४ किल्ला तोकिसकिएको छ । पूर्व र दक्षिणतिर ५०–५० मिटरमा पिलर गाडेर सिमाना छुट्याइसकेको अवस्था छ । विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने नम्बरी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । मुख्य धावनमार्ग पर्ने ठाउँ टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । पर्साह खोलामा नदी नियन्त्रणको काम भइरहेको छ । निर्माण क्षेत्रहुँदै दक्षिणीतिर अर्थात् बस्तीमा जाने बाटोको दुवैतिर तारबार भइसकेको छ ।
टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनका लागि अध्ययन भइरहेको छ भन्नुभयो, व्यवस्थापनको उपाय नै निकालियो कि अझै अध्ययनमै सीमित हो ?
टाँगिया बस्ती सबै वनको जग्गामा पर्छ । साढे ६ सय हेक्टरमा पर्ने यो बस्ती व्यवस्थापनका लागि हामीले एक तहको अध्ययन पूरा गरिसकेका छौं । टाँगियावासीले प्रतिघरधुरी २ बिघा १० कट्ठा माग गरिरहेका छन् ।
यस कारण बन्नैपर्छ निजगढ विमानस्थल
विमानस्थल बनाउन रूख नभएको मरुभूमि कहाँ छ श्रीमान् ?
विमानस्थलको नाममा ११ वर्षदेखि बन्धक
हामीले आफ्नो हिसाबले व्यवस्थापनको तयारी गरेका छौं । सकेसम्म उहाँहरूको चित्त बुझाएरै बस्ती व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो योजना छ । मलाई लाग्छ, अबको केही साता वा महिनामै टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनको टुंगो लाग्छ । तर, बस्ती व्यवस्थापनका लागि अन्तिम निर्णय लिने कामचाहिँ मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ ।
टाँगिया बस्तीको व्यवस्थापनचाहिँ कसरी गरिँदै छ ? अध्ययनबाट तपाईंहरूले कुनै मोडालिटी त बनाउनुभयो होला नि ?
हामीले एक खालको प्रस्ताव केन्द्र सरकारमा पठाएका छौं । यो हाम्रो आन्तरिक गृहकार्य मात्रै हो । अहिले नै बाहिर ल्याउन मिल्दैन ।
अध्ययनचाहिँ केको गर्नुभयो त ?
बस्ती स्थानान्तरणका लागि हामीले ठाउँहरू पहिचान गर्‍यौंं । जग्गा दिनुपर्ने अवस्था आए त्यस्तो जग्गाको पहिचान गरिएको हो । जंगल सकिनेबित्तिकै दक्षिणतिर वनकै खाली जग्गाहरू छन्, जहाँ रूखबिरुवा छैनन् । कतिपय अतिक्रमण भएका जग्गा पनि छन् । एउटा बुट्यान क्षेत्र छ । अध्ययन र केही सुझाव हामीले माथि (मन्त्रालय)मा पठाएका छौं । अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले रुख काट्न मात्रै रोक लगाएको हो, अरु कामचाहिँ किन भइरहेको छैन ?
काम नै नभएको चाहिँ होइन । मैले भनिहालें, टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनका लागि हामीले अध्ययन सकिसकेका छौं । रुख काट्ने काम त सर्वोच्चले नै रोकिदिएको छ । लगानी मोडालिटी टुंग्याउने काम लगानी बोर्डको जिम्मामा छ । आयोजनाले सक्नेजति काम त अहिले पनि गरिरहेको छ ।
तर, काम त देखिएको छैन, विमानस्थल निर्माणमा देखिएका चुनौती के–के हुन् ?
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा तीनवटा चुनौती देखेको छु । पहिलो, रुख कटान, दोस्रो, टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन र तेस्रो, लगानी मोडालिटीबारे अन्योल । तर, विमानस्थल निर्माणमा केन्द्र सरकार अग्रसर देखिएकाले यी चुनौती सहजै समाधान हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
रुख नकाटी विमानस्थल बन्दैन ?
अहिले प्रस्तावित विमानस्थल पोखरा वा भैरहवाजस्तो होइन । अहिले प्रस्तावित क्षेत्र गहिरो प्राविधिक अध्ययनको निष्कर्ष हो । योभन्दा उपयुक्त स्थान अन्त कतै नभएकैले निजगढलाई चुनिएको हो । रूख नकाटी विमानस्थल तयार हुन सक्दैन । सुरुमा विमानस्थल निर्माणका लागि ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन आवश्यक देखियो । ८ हजार भनेको विमानस्थलका लागि आवश्यक मानिएको क्षेत्र मात्रै हो, यो क्षेत्रमा पर्ने सबै रुख काटिने होइन । करिब १९ सय हेक्टरमा विमानस्थल बन्छ र यही क्षेत्रभित्र पर्ने रुख काटिने हो । यो क्षेत्रमा १ लाख ३०/३५ हजारको हाराहारीमा रूख काट्दा पुग्ने हामीले स्पष्ट पारिसकेका छौं ।
रूख काटेरपछि प्लटिङ गरेर बेचिने हो कि भन्ने आशंका छ नि ?
धेरैमा यस्तो आशंका रहेको हुन सक्छ । रुख काटेपछि विमानस्थल नबन्ने भयो भने वनको जग्गा बेचिने हो कि भन्ने चिन्ता कतिपयमा छ । तर, यसप्रति सबैभन्दा बढी सचेत त सरकार नै छ । सरकार कुनै हालतमा निजगढमा विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छ । त्यसैले यस्ता खालका आशंका गर्नु हुँदैन ।
निजगढमा किन आवश्यक छ विमानस्थल, यो बन्दा मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ ?
काठमाडौंमा रहेको एक मात्र विमानस्थलको विकल्प आजभन्दा २५ वर्षअघि भएका दुई ठूला दुर्घटनापछि खोजिएको हो । काठमाडौं उपत्यकाको चारैतिर अग्ला–अग्ला डाँडा छन् । वायुयान उडान अवतरणका लागि यो विश्वका कठिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गनिन्छ । यहाँ ठूला वायुयान सोझै उडान गर्न नमिल्ने, उत्तरबाट दक्षिणतर्फ एकतर्फी उड्न सहज हुने, यहाँको उडान विधिको जटिलता, विमानस्थलको उचाइ र धावनमार्गको लम्बाइका कारण पूर्ण क्षमतामा ठूला विमान उडान अवतरण गराउन सकिँंदैन । यसबाट हवाई सेवा आर्थिक दृष्टिले मितव्ययी हुन नसक्ने र यसको प्रत्यक्ष असर वायुसेवा कम्पनी तथा हवाई यात्रुले झेल्नुपर्छ । अन्य प्राविधिक चुनौतीहरू पनि छन् ।
विकासको आस ; आवास कि वनबास ? | टांगिया वस्ती | शिलापत्र संवाद निजगढ विमानस्थलबाट
निजगढ विमानस्थल : बिँड तात्यो, ताप्के तातेन
निजगढ विमानस्थल निर्माणमा बल्ल तात्यो सरकार
मध्य तराईमा पर्ने निजगढ क्षेत्र काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिक छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गबाट १ घन्टाको दूरीमा छ । विश्वका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू हेर्ने हो भने पनि विमानस्थल र मुख्य शहरको दूरी एक घन्टाको हाराहारीमा रहेको हुँदा राजधानीलाई लक्षित गरी निर्माण हुने यो स्थल उपयुक्त दूरीमा छ ।
अहिले प्रस्तावित क्षेत्र भारततर्फको दक्षिणी सीमाबाट २७ किमि र पश्चिमतर्फ पर्ने सीमाबाट ४५ किमि रहेकाले हवाई उडानको दृष्टिले १० नटिकल माइलको नियन्त्रित क्षेत्र (कन्ट्रोल जोन) सम्पूर्ण रूपमा नेपाली हवाई क्षेत्रमा पर्ने, वायुयान नेपालको अवरोधरहित स्थानमा नेपालभित्रै होल्डिङ गर्न मिल्ने, विमानले नेपालकै भूभागमा आवश्यक उचाइ लिन सक्ने र विमानलाई नेपालकै भूभागभित्र ओराल्दै अवतरण गराउन मिल्छ ।
विश्वका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू हेर्ने हो भने पनि विमानस्थल र मुख्य शहरको दूरी एक घन्टाको हाराहारीमा रहेको हुँदा राजधानीलाई लक्षित गरी निर्माण हुने यो स्थल उपयुक्त दूरीमा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान आगमनका लागि भारतबाट सहमति जनाइएको जनकपुर प्रवेशबिन्दु हुँदै पूर्वतर्फबाट आउने र भैरहवा प्रवेशबिन्दु हुँदै पश्चिमबाट आउने विमानलाई नेपालकै हवाई क्षेत्रभित्र ओराल्दै अवतरण गराउन मिल्ने हुँदा उडान सञ्चालनका लागि सहज हुन्छ । यो स्थान चुरे डाँडाबाट १५ किमि तथा महाभारत पर्वतबाट ३५ किमिको दूरीमा छ । त्यसैले उडान सञ्चालनका दृष्टिले अवरोधरहित तथा सुरक्षित छ । यहाँ विमानस्थल निर्माणका लागि न्यूनतम भूमि अधिग्रहण गर्नुपर्ने र मानव बस्तीसमेत अत्यन्त पातलो र अधिकांशतः सुकुम्बासी बस्ती रहेकाले निकटस्थ स्थानमा रहेका सार्वजनिक जग्गामा पुनर्वास गराउन सहज छ ।
नजिकै रहेको सिमरा विमानस्थललाई नै विस्तार गर्न सकिँदैन र ?
अहिले प्रस्तावित क्षेत्र अढाइ दशकअगाडि विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पहिचान गरेको क्षेत्र हो । प्रस्तावित क्षेत्रबाट फास्ट ट्रयाक नजिकै छ । यो ११ हजार ८ सय ७५ विगाहमा पर्छ । यसमा जम्मा १ सय १० विगाह मात्रै नम्बरी जग्गा छ । सिमरालाई विस्तार गर्ने वा अन्य ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउन त सबै नम्बरी जग्गा पर्छ । एयर स्पेस, एयरपोर्टबाट इन्डियाको बोर्डरको दूरीको कुरा आउँछ । त्यसबाहेक अहिले प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्न धेरै काम अघि बढिसकेको अवस्था छ । त्यसैले अन्यत्र त्यस्तो सम्भावना छैन ।
निजगढ विमानस्थल बन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म पूर्णतः ढुक्क छु । यस अर्थमा म ढुक्क छु कि केन्द्र सरकार यो आयोजना अघि बढाउन प्रतिवद्ध छ । देखिएका अवरोध हटाउँदै अघि बढ्न केन्द्र सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ । स्थानीयवासी पनि सकारात्मक छन् । २४ लाख रूख काटिन्छ भन्ने हल्लाले पर्यावरणवादीहरूलाई चिन्तित बनाएको थियो होला, हामीले स्पष्ट पारिसकेका छौं कि १ लाख ३५ हजारभन्दा बढी रूख काट्नु पर्दैन ।
फलाे अप स्टाेरी :
स्वार्थको दलदलमा निजगढ विमानस्थल
निजगढ विमानस्थलका चार चुनौती
८० वर्षीय सूर्यबहादुर भन्छन्, ‘सरकार ! कि मारिदे, कि बाँच्न दे’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३, २०७६, ०४:०८:००
७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको श्रेय मैले पाउनुपर्छ
ब्याजदरमा सहुलियत चाहियो